‘पार्टीले नै सबै कुरा गर्ने हो भने किन चाहियो मन्त्रिपरिषद्?’ « Media for all across the globe
‘पार्टीले नै सबै कुरा गर्ने हो भने किन चाहियो मन्त्रिपरिषद्?’
उनले आगामी एकता महाधिवेशनमा सहमतिबाटै नेतृत्व छानिने बताए। आफू उठ्ने या अर्को नेतालाई समर्थन गर्ने कुरा अहिले नै चर्चा गर्न उचित नहुने उनले बताए।
उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावले पार्टी एकता बचाइ राख्‍न भूमिका खेलेको स्वीकार्दै मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे आफूले विचार गरिरहेको बताएका छन्।
यद्यपी ओलीले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्ने योजना नरहेको बताए। उनले अर्को चुनावपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीहरु हेरफेर गरिने दाबी गरे। ‘मुख्यमन्त्रीहरु चुनावपछि मात्रै फेरिन्छन्’, उनले भने, ‘हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौं, देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ।’ अर्थमन्त्री परिवर्तनका विषयमा उनले अझै दुई चार दिन हेर्न आग्रह गरेका छन्। ‘अझै दुई चार दिन हेरौं न, भदौ २० गते पनि आउन लाग्दैछ’, उनले भने, ‘कार्यशैली त सबैको कसलाई पो मन पर्छ र? तर म अर्थमन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट छु।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ठीक ढंगले अघि बढिरहेको बताएका छन्। ‘सरकार ठीक ढंगले चलेको छ। हामी ठीक दिशामा अघि बढिरहेका छौं। कसलाई कतिखेर मन पर्दै त्यो त म भन्‍न सक्दिनँ’, उनले भने, ‘पार्टीमा बाहिर भने जस्तो विवाद थिएन, सरकारलाई कसैले असहयोग गरेको भन्‍ने कुरा पनि होइन।’
उनले प्रधानमन्त्रीले मनपरी गरेको भन्‍ने कुरा गलत भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले मनोमानी गर्‍यो भन्‍नेहरुले पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ हाम्रो संसदीय प्रणालीबारेमा’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो भन्‍ने कुरा बुझ्‍नुपर्छ। पार्टीले नीतिगतरुपमा सरकार चलाउँछ। तर सीधै हस्तक्षेप गर्ने होइन।’
नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले पार्टीले सबै कुरामा हस्तक्षेप गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्कै आवश्यकता नहुने बताए। ‘पार्टीले नै सबै हस्तक्षेप गर्ने हो भने किन मन्त्रिपरिषद्‍ बनाउनु? किन प्रधानमन्त्री बनाउनु? सरकारका नाममा पार्टीकै सचिवालय भए भइगयो नि’, उनले भने, ‘पार्टीले नै सबै कुरा गर्ने हो भने किन मन्त्रिपरिषद् चाहियो? हामीले हाम्रो शासन प्रणाली र सिस्टम बुझ्‍नु आवश्यक छ।’